Indlu ethokomele endaweni enemfashini (Igumbi #3) - I-Airbnb
Indlu ethokomele endaweni enemfashini (Igumbi #3)
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Shaleena
U-Shaleena Ungumbungazi ovelele
ENyakatho-mpumalanga yeMinneapolis ebukekayo, enakho konke okudingayo eduze. Izimakethe zokuthenga, ipaki lamanzi, izindlela zokuhamba/amapaki, izindawo zokudlela kanye nemigoqo yazo zonke izitayela ngaphakathi kwebanga lokuhamba noma imayela noma amabili. Amamayela angu-5 kuphela ukusuka edolobheni laseMinneapolis kanye nenkundla yezemidlalo yase-U.S. Bank.
Lesi sikhala silungele abantu abadala abangafika kwabangu-2.
Ngiyi-minimalist, ngakho-ke ikhaya lami lihlanzekile, alinamfuhlumfuhlu futhi linethezekile ngakho konke okudingayo.
4.89 · 100 okushiwo abanye
Indlu ingaphesheya komgwaqo ukusuka endaweni yokuphuzela utshwala encane enokudla okumnandi ngempela. Angiyena umlandeli omkhulu "wokudla kwasebha," yingakho ngithanda ukuhlukahluka abakunikezayo. Kunenye indawo yokudlela encane yase-Mexican/Honduran ngaphesheya komgwaqo engiyithandayo. Amabhulokhi ambalwa nje esitolo segrosa, ikhemisi, nekhofi le-Starbucks.
Ngihlala ngakolunye uhlangothi lwe-duplex, ngakho-ke ngisendaweni. Nakuba, angikho sekhaya isikhathi esiningi njengoba ngimatasatasa, kodwa ngihlala ngitholakala ngocingo/ngombhalo.
UShaleena Ungumbungazi ovelele